ध्यान दिनु पर्ने कुरा - गर्भपतन चक्की कसरी प्रयोग गर्ने
ध्यान दिनु पर्ने कुरा आफ्नो गर्भपतन सकेसम्म गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ भने गर्भपाती चक्की योनीमा नराखेर तल्ला दाँत र गालाको बिचमा च्यापेर मुखमा राख्नुहोस्। यो चक्की प्रयोग गरिरहेको बेला नसोचेको कुनै गम्भीर समस्या आइ पर्योि र चिकित्सकीय सहयोग चाहियो भने योनीमा राखेको चक्की देखिन सक्छ। कतिपय मुलुकमा योनीमा यस्तो चक्की भेटिएमा तपाईँ विरुद्ध उजुर उजुर गरिन सक्छ।
तपाईँले गर्भ धारण गरेको कति भयो? अनुसन्धानबाट प्राय पछिल्लो पटक महिनावारी भएको १० हप्ता भन्दा अघिको गर्भको लागि औषधीय गर्भपतनको सल्लाह दिइने गरेको सङ्केत पाइएको छ। पछिल्लो पटक महिनावारी भएको कति समय भयो भन्ने निश्चित गर्न गर्भ गणक प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईँको पछिल्लो पटकको महिनावारी
मा वा त्यसपछि सुरु भएको भए तपाईँ अझै गर्भपाती चक्की प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ।
गर्भपतनको क्रममा तपाईँलाई सहयोग चाहियो भने कसको अपेक्षा गर्नु हुन्छ? चिकित्सकीय सहयोग चाहिएमा तपाईँले कसलाई विश्वास गर्नु हुन्छ? केही मुलुकमा गर्भपतन सम्बन्धी कडा सांस्कृतिक र सामाजिक नियम हुन्छन्। जटिल अवस्था आयो भने तपाईँले आफ्नो सहयोगको लागि कसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइ राख्नु राम्रो हुन्छ।
चक्की लिनु भन्दा पहिले:
तपाईँले पाठेघर भित्र कपर टी (क्वाइल आइयुडी) वा प्रोजेस्टेरोन आइयुडी जस्ता गर्भनिरोधक साधन राख्नुभएको छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्छ।
तपाईँको दुधे बच्चा छ भने मिसोप्रोस्टोल चक्कीले पखाला चलाउन सक्छ। यसबाट जोगिन बच्चालाई दुध चुसाउनु होस्, मिसोप्रोस्टोल चक्की लिनुहोस् र ४ घण्टा पछि मात्र अर्को पटक दुध चुसाउनुहोस्।
तपाईँलाई एचआइभी सङ्क्रमण छ भने रोग अझ नबढेको, रेट्रोभाइरल प्रतिरोधी उपचारमा रहेको र अन्य स्वास्थ्य समस्या नरहेको निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईँलाई रक्तअल्पता छ भने आवश्यक परे सहयोग गर्न सक्ने स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई चिनि राख्नु होस्। तपाईँ बढी नै अल्परक्त (रगतमा फलामको मात्रा कम भएको) हुनहुन्छ भने गर्भपाती चक्की प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
यो प्रक्रिया पूरा होउन्जेल धेरै पानी पिउनुहोस्।
हल्का खानेकुरा खानुहोस् (क्रेकर वा टोस्टले वाकवाकी कम गर्न सक्छ)।
मिसोप्रोस्टोल चक्की प्रयोग गर्दा आफ्नो घर वा कुनै यस्तो ठाउँमा बस्नुहोस् जहाँ एकान्त छ र चाहेमा चक्की लिएपछि केही घण्टा पल्टेर आराम गर्न सक्नु हुन्छ।
चिया वा खानेकुरा ल्याइ दिने र आवश्यक परे हेरचाह गर्न सक्ने व्यक्ति साथमा राख्दा तपाईँलाई सहयोग पुग्छ।
महिनावारीका टाला प्रशस्त राख्नुहोस्। तपाईँले सामान्य महिनावारीमा भन्दा छिटो टाला फेर्नु पर्ने हुन सक्छ।
तपाईँलाई स्वास्थ्य सुविधा भएको ठाउँमा लैजानु पर्योा भने के गर्ने भन्ने योजना बनाउनुहोस्।